यी चिज खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् पानी, निम्त्याउँछ घाँटीको समस्या ! – Sandesh Press
यी चिज खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् पानी, निम्त्याउँछ घाँटीको समस्या !
July 10, 2021 708
काठमाडौँ । यस्ता केही धेरै खाद्य पदार्थहरू छन् जुन हामीले खाएपछि पानी पिउनुहुँदैन । यदि हामीले यस्तो गर्यौ भने हामी बिमार हुनसक्छौँ । वा तपाईंले पेट सम्बन्धी केही अन्य समस्याहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । खाना खाएपछि पनि पानी पिउन सल्लाह दिइदैन। यो गरेमा खाना राम्रोसँग पचदैन। तर के तपाईंलाई थाहा छ के खाद्य पदार्थहरू खाएपछि पानी पिउनुहुँदैन ? आउनुहोस् जानौँ:
आइसक्रीम खाएपछि नखानुहोेस्
आइसक्रिम खाएपछि तुरुन्तै पानी पिउन निषेध गरिएको छ। यसो गर्नाले घाँटी दुख्न सक्छ। त्यसैले यो कोशीश गर्नुहोस् कि आइसक्रिम खाएको १० मिनेट पछि पानी नपिउनुहोस् ।
केही व्यक्तिहरूले तातो चिया पिएको तुरुन्तै टेस्ट बड्सको कारणले पानी पिउँदछन् । यो तपाइँको पेट को लागी हानिकारक हुन सक्छ। त्यसैले चिया वा कफी पिइसकेपछि २० देखि २५ मिनेटपछि मात्र पानी पिउने गर्नुहोस् ।
केही अध्ययनका अनुसार मिठाई खाएपछि तुरुन्तै पानी पिउनु हुँदैन। यदि यो गरेमा हाम्रो शरीरमा रगत चिनीको मात्रा बढ्छ। यसको अधिक मात्रामा प्रयोग गर्नाले पनि टाइप ९ मधुमेह हुन सक्छ। त्यसैले मिठाइ खाए पछि तुरुन्तै पानी पिउन कोसिस नगर्नुहोस्।
दूध पिउँदा तुरुन्तै पानी पिउँदा, मेटाबोलिजम ढिलो हुन्छ। र यसले एसिडिटी र अपचको समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ।
खरबुजा गर्मी मौसममा खाने एक स्वस्थ फल हो । यसले शरीरलाई हाइड्रेट राख्ने काम गर्दछ । यसमा लगभग ६० प्रतिशतभन्दा बढी पानी समावेश भएको हुन्छ । तरबूजाहरू खाएपछि तुरुन्तै पानी पिउन मनाही गरिएको छ किनकी यसो गर्नाले अपच हुने र पेट बाहिर निस्कने जस्तो समस्या आइपर्दछ
यी फललाई खाएपछि नखानुहोस्
सुन्तला, मौसमी, अमला र कागती खाएपछि तुरुन्तै पानी पिउन मनाही गरिएको छ साथै केरा, चीकू, नाशपाती, स्याउ र अनार खाए पछि पानी पिउनु हुँदैन। सिट्रस फल खाए पछि तपाईलाई घाँटी दुख्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ त्यसैले यी फलफुल खाएपछि पानी नखान डाक्टरको सुझाव रहेको पाइन्छ ।
Prevमहिनावारी भएकाे बेलामा पेट दुख्ने समस्या भएका महिलाहरुका लागि प्याजले गर्छ औषधीकाे काम !
Nextभारी वर्षाका कारण जलमग्न काठमाडौं
के तपाईं जाडोमा हात-खुट्टा फ’टेर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् घरेलु उपाय
गुल्मीमा एकैपटक मध्यरातमा यी दुई घटना